सय युवाबाट साढे २ करोड ठगेर फरार - Namaste Times
मंगलबार, आषाढ २१, २०७९ | Friday, August 6, 2021
सय युवाबाट साढे २ करोड ठगेर फरार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८ समय: १४:०६:३०
काठमाडौं – लगातारको वर्षाले चिसो बढाए पनि काठमाडौंमा जाडो छैन । तर ओखलढुंगा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका पवन बस्नेत गत आइतबार बाक्लो ज्याकेट, पन्जा, बाक्लो मोजा र उनीको न्यानो टोपी किन्ने ताकमा थिए ।
कर्मा तामाङले काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा सञ्चालन गरेको युरो टेक एन्ड करिअर्स कन्सल्ट्यान्ट प्रालिको पान दर्ता प्रमाणपत्र
चुच्चेपाटीको युरो टेक एन्ड करिअर्स कन्सल्ट्यान्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्मा तामाङले उनलाई भनेका थिए, ‘केटा हो, भोलि क्रोएसिया उड्ने हो । उता साह्रै जाडो छ । बाक्लो न्यानो कपडा किनिराख्नू ।’ दक्षिण–पूर्वी युरोपको क्रोएसियामा तापक्रम २०–२१ डिग्री सेल्सियस छ भन्ने कुरा पवनलाई के थाहा ?
क्रोएसिया उड्ने भनिएको अघिल्लो दिन बिहान कन्सल्टेन्सीको कार्यालयमा पुग्दा पवनले आफूजस्तै दर्जनौं तन्नेरीलाई देखे । धेरैजसोको हातमा पैसा बुझाएको कागजात थियो, अनुहारमा भने चर्को आक्रोश देखिन्थ्यो । पवनले एकैछिनमा थाहा पाइहाले, क्रोएसिया, इस्टोनिया, क्यानडालगायतका देशमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई सयभन्दा बढीसँग पैसा उठाएर कर्मा टाप ठोकिसकेछन् । पवनको अनुहारबाट उत्साहको रङ उडिहाल्यो ।
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको गाडी चलाउने पवन एक जना साथीमार्फत क्रोएसिया जाने आकर्षक अफर सुनेर हान्निएर काठमाडौं आएका थिए । आफन्त र चिनेजानेकासँग हारगुहार गरेर जुटाएको ४ लाख रुपैयाँ उनले कर्मालाई बुझाएका छन् । पवनले सुनाए, ‘मेरो गाउँका ५ जनाको मात्रै २१ लाख फसेको छ ।’ उनीहरूमध्ये तीन जनालाई ड्राइभिङ र दुईलाई प्याकिङको काम दिलाइदिने र मासिक ६ सय युरो तलब आउने आश्वासन कर्माले दिएका थिए । उनीहरू अहिले फसेको रकम के हुने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
छथर गाउँपालिका ४ धनकुटाका हेमबहादुर तामाङ इस्टोनिया उड्ने आशा बोकेर कोरोना कहरका माझ गत साता काठमाडौं आएका थिए । कर्माले उनलाई आउने शनिबार उडाइदिने भन्दै पटकपटक गरेर २ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । हेम र उनको गाउँ छिमेकका चार जनाले गरेर कर्मालाई झन्डै १६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । हेमले घरबाटै मनी ट्रान्सफरमार्फत र काठमाडौं कार्यालयमा आईवरी कर्मालाई पैसा बुझाएका थिए । उनीहरूलाई इस्टोनियमा मासु काट्ने र प्याकिङ गर्ने काम मिलाइदिने र त्यसबापत मासिक ८ सय ५० युरो तलब हुने आश्वासन कर्माले देखाएका थिए ।
‘गत आइतबार अफिसमा पुग्दा झन्डै सय जना जति पीडित पो भेटिए । अफिसमा पनि ताल्चा मारेर मान्छे फरार भएछ,’ हेमले सुनाए, ‘केहीले प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् । हामी भने के गर्ने भन्ने अलमलमै छौं ।’ कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार नुवाकोट स्थायी ठेगाना भएका कर्माले उक्त कन्सल्टेन्सी २०७६ साउन २७ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको देखिन्छ । विभिन्न युरोपेली देश उडाइदिने आश्वासन देखाएर उनले करिब सय जनालाई ठगेको छन् । पीडितले छुट्टाछुट्टै तयार पारेको विवरण हेर्दा कर्माले ती सबैबाट करिब साढे २ करोड रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । पीडितले १ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म कर्मालाई बुझाएका थिए । धेरैजसो पीडित पूर्वी पहाडी जिल्लाका छन् । तीमध्ये धेरैजसो साक्षरता कम भएका र बेरोजगार छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आफूहरू ठगिएको थाहा पाएपछि पवनलगायतका युवा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध पुगेका थिए । पवनका अनुसार वृत्तले उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी ठगी भएकाले श्रम कार्यालयमा सुझाव दियो । त्यसपछि उनीहरू श्रम कार्यालय पुगे । तर श्रमका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई यस्तो मुद्दा प्रहरीले नै हेर्ने भएकाले काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकु जानू भनेर फर्काइदिए । उनीहरू फेरि टेकु पुगे । प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डीएसपी रमेशकुमार बस्नेतले कर्माविरुद्ध वैदेशिक रोजगारी ठगीमा दुई दिनअघि नै मुद्दा दर्ता भएको बताए ।
आफू र भाइसहित ३ जनाको १२ लाख फसाएका ओखलढुंगा खिजीदेम्बाका वीरबहादुर मगरले प्रहरीले कर्माका बारेमा केही पत्ता लगाई नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले राम्ररी खोजिदिए पैसा आउँथ्यो कि ! नत्र त अनेकतिर ऋण धन गरेर उठाएको पैसा कसरी तिर्न सकिएला र ?’